OTU ESI EJI MSI AFTERBURNER - ESI MEE - 2019
Ntuziaka maka iji MSI Afterburner
Ọtụtụ ndị ọrụ nke nsụgharị nke Photoshop na-eche nsogbu ndị na-eme usoro ahụ, karịsịa, na njehie 16.
Otu n'ime ihe kpatara ya bụ enweghị ikike ịgbanwe ọdịnaya nke nchekwa ndị dị na mmemme ahụ na-enweta n'oge mmalite na ọrụ, yana enweghị ike ịnweta ha.
Enweghị ogologo oge, anyị na-amalite idozi nsogbu ahụ.
Gaa na nchekwa ahụ "Kọmputa"bọtịnụ push "Tọọ" ma chọta ihe "Nhọrọ nchekwa na nchekwa".
Na windo ntọala nke meghere, gaa na taabụ "Lee" ma wepu ihe a "Jiri ọkachamara ịkekọrịta".
Na-esote, pịgharịa gaa na listi ahụ ma debe ọkụ ọkụ gaa "Gosi faịlụ zoro ezo, nchekwa na draịva".
Mgbe ịmechara ntọala pịa "Tinye" ma Ok.
Ugbu a gaa na diski usoro (ọtụtụ mgbe ọ bụ C: /) ma chọta nchekwa ahụ "ProgramData".
Na ya, gaa na nchekwa "Adobe".
A na-akpọ folda anyị nwere mmasị "SLStore".
Maka nchekwa a, anyị kwesịrị ịgbanwe ikikere.
Anyị na-pịa nri na nchekwa na, na ala, anyị na-ahụ ihe ahụ "Njirimara". Na mpio nke meghere, gaa na taabụ "Nchebe".
Ọzọkwa, maka ìgwè ọ bụla nke ndị ọrụ anyị gbanwere ikike iji "Nweta zuru ezu". Anyị na-eme nke a mgbe o kwere omume (usoro a na-enye ohere).
Họrọ otu n'ime ndepụta ma pịa bọtịnụ "Gbanwee".
Na windo na-esote, tinye igbe nlele "Nweta zuru ezu" na kọlụm "Kwe ka".
Mgbe ahụ, na windo ahụ, anyị na-enye otu ikikere maka ndị ọrụ niile. Na njedebe pịa "Tinye" ma Ok.
N'ọtụtụ ọnọdụ, a edozi nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na nke a anaghị eme, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ime otu usoro ahụ na faịlụ mmemme ahụ. Ị nwere ike ịchọta ya site na ịpị aka na ụzọ mkpirisi na desktọọpụ na ịhọrọ Njirimara.
Na nseta ihuenyo, Photoshop CS6 label.
Na windo Njirimara, pịa bọtịnụ ahụ. Ebe Njikwa. Omume a ga-emepe folda ahụ nwere faịlụ Photoshop.exe.
Ọ bụrụ na ịnweta njehie 16 mgbe ịmalite CS5 Photoshop, ozi ndị dị na isiokwu a ga - enyere aka dozie ya.